Fombafomba mampangorohoron’i Japana nampidirina ao anatin’ny lisitry ny vakoka ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanan’ny UNESCO · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, bahasa Indonesia, 简体中文, русский, 繁體中文, Italiano, English
Fiakanjo nentim-paharazana demony namahage avy amin'ny tanànakely samihafa ao amin'ny prefektioran'i Akita, Japan. Saripikan'i Douglas P Perkins Douglaspperkins/CC 3.0
Miaraka amin'ny reggae an'i Jamaika, ny hurling irlandey ary ny tolona Zeorziana nentin-drazana, dia nanampiana ny lisitry ny vakoka ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ao amin'ny Fifandaminan'ny Firenena Mikambana amin'ny lafiny Ara-Panabeazana, Siantifika ary ara-Kolontsaina (UNESCO) tamin'ny Novambra 2018 ny fombafombam-bahoaka “fitsidihan'andriamanitra” (来訪神, raihoshin) avy ao Japana.
Any amin'ny fiarahamonina ambanivohitra no anatanterahana ny fitsidihana maha-andriamanitra manerana an'i Japana, indrindra rehefa amin'ny faran'ny taona, na rehefa miova ny vanim-potoana, indrindra rehefa amin'ny fiafaran'ny asara (andro mafana) sy amin'ny fanombohan'ny mihintsan-dravina, ary amin'ny fiafaran'ny ririnina mahazatra — araka ny tetiandron'i Japana fahiny — ary amin'ny fanombohan'ny lohataona. Mifototra amin'ny fombam-bahoaka efa ela tao Japana tahaka ny Boddisma eny fa hatramin'ny Shintoisma aza ny fombafomba sy ireo maha-andriamanitra.
Araka ny UNESCO:
Raha samy manana ny fombafombany ny faritra tsirairay avy, ireo andriamanitra mamangy dia fantatra kokoa hoe namahage, izay karazana rakakabe na demony. Ny fombafomba matetika dia ahitana lehilahy na vehivavy mitafy demony namahage na raishoshin hafa mampiasa fitafy donendrinendrina sy sarontava — ary indraindray mitondra antsy ho fitaovam-piadiana.
Ao amin'ity lahatsary avy any Kumamoto, any atsimo andrefan'ny nosy Kyushu ity, miditra ny trano ny lehilahy iray manao fitafian'ny namahage mandritra ny setsubun, izay araka ny fomba nentin-drazana dia ny andro iray mialoha ny fanombohan'ny lohataona izay tandremana isaky ny 3 febroary amin'izao fotoana izao.
Misy amin'ny endrika isan-karazany ilay fomban-drazana manerana ny vondronosy japoney. Ny nosy Miyako, any amin'ny tena farany atsimo andrefan'i Japan izao manatontosa ny fombafomba antsoina hoe Paantu. Ireo lehilahy ao an-toerana izay mandray ny anjara toeran'ny andriamanitra mamangy dia mitafy sarontava sy mandrakotra ny tenany amin'ny fotaka sy ravim-boaloboka, ary avy eo mirezareza manodidina ny tanàna manosotra fotaka ny olona mirary fahasalamana sy fanambinana ao anatin'ny 12 volana manaraka.
Fombafomba nentim-paharazana tafiditra ao amin'ny lisitry ny UNESCO amin'ny fitsidihan'andriamanitra ihany koa ny Fetiben'ny Andriamanitra Boze ao Akusekijima, ny fombafomban'ny mendon ao Kagoshima, ary ny fombafomba don-don tandremana ao amin'ny vondro-nosy Koshikijima ivelan'ny morontsiraka atsimo andrefan'i Japana, ahitana demony na rakakabe, mitafy ravinkazo, mibedy [mandrisika] ankizy iray ho tsara fitondratena amin'ny taona hoavy:
Ny prefektioran'i Akita any avaratra atsinanan'i Japan angamba no malaza indrindra amin'ity fombafomban'ny fitsidihan'andrimanitra ity, ary misy ny mozea natokana ho an'ny demony namahage ao amin'ny tobin'ny Saikanosy Oga.
Taorian'ny tsy fahombiazan'i Japana hampiditra ao anatin'ny lisitry ny UNESCO amin'ny vakoka ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ny fombafomban'ny nahamage ao Akita, taona maro lasa izay, dia nanapa-kevitra i Japana hampiditra ireo fombafombam-pitsidihan'andrimanitra rehetra ho ao anatin'ny vondrona iray tamin'ity taona 2018 ity ary nahomby izany.